Dhul Gariirka PSG Ee Ciyaartoyda Waa Wayn Oo Halkooda Ka Sii Socda Iyo Agaasimaha Ciyaaraha Leonardo Oo Real Madrid Ka Farxiyay. - Gool24.Net
Dhul Gariirka PSG Ee Ciyaartoyda Waa Wayn Oo Halkooda Ka Sii Socda Iyo Agaasimaha Ciyaaraha Leonardo Oo Real Madrid Ka Farxiyay.
Dhawaan ayay ahayd markii uu agaasimaha ciyaaraha kooxda PSG si rasmi ah ugu dhawaaqay in Neymar Jr uu kooxdiisa ka bixi karo haddii ay helaan dalab dhinacyada oo dhan u fiican, laakiin isla agaasimaha PSG ee Leonardo ayaa sheegay in aanu damaanad qaadi karin in Mbappe uu heshiis cusub saxiixi doono.
Iyada oo Barcelona muhiimada kowaad ka dhiganaysa saxiixa Neymar Jr, isla markaana ay wada xaajood kula jirto maamulka kooxda PSG, waxa uu hadalka Leonardo ee Mbappe uu xiiso wayn u abuurayaa kooxda Real Madrid.
Real Madrid ayaa xagaagan doonaysay in ay la soo saxiixato Kylian Mbappe laakiin markii ay Eden Hazard la soo saxiixdeen isla markaana loo sheegay in aanu sanadkan xidiga reer France bixi karin ayay xagaaga soo socda ka dhigteen midkii ay Mbappe u soo xero galin lahaayeen.
Kylian Mabppe ayaa xafladii abaal marinaha xili ciyaareedkii la soo dhaafay waxa uu ka sheegay in uu doonayo sidii uu meel kale talaabada xigta ee waayihiisa ciyaareed uga bilaaban lahaa, wuxuuna kadib iska diiday in uu heshiis cusub u saxiixo PSG.
Kylian Mbappe oo maanka ku haya sida ay maamulka PSG ciyaartoyda ugu cadaadiyaan in ayna kooxdooda ka bixin, waxa uu diyaar u yahay in uu heshiiska hadda dhamaysto oo haddii ay qasab ku noqoto uu xor ku bixi karo ama uu PSG cadaadis ku saari karo.
Agaasimaha ciyaaraha PSG ee Leonardo ayaa cadeeyay in aanu hubin in Mbappe uu heshiis cusub kooxdiisa u saxiixi doono waana dhul gariir kale oo madaxda carbeed ee PSG ku habsaday kuwaas oo halis ugu jira in ay lumiyaan labadii xidig ee kooxdooda ugu muhiimsanaa.
Agaasimaha ciyaaraha PSG ee Leonardo oo ka hadlaya heshiis cusboonaysiintii lala doonayay Mbappe iyo sida aanu u hubin ayaa yidhi: “Anigu ma doonayo in aan ballamo hawada u tuuro aniga oo aan hubin in la ilaalin karo”.
“Anigu waligay balamo ma sameeyo laba sababood awgood, ugu horayn waxay sababtu tahay anigu ma ihi qofka wax walba in ay dhacaan kooxda masuul uga ah, mar labaadka, anigu ma doonayo in aan hawada u tuuro balamo aanan hubin in ay ilaalinayaan. Anigu xaqiiqda oo kaliya ayaan xiiseeyaa iyo waxa aanu maanta hubno”. ayuu Leonardo hadalkiisa raaciyay.
Kylian Mbappé ayaa u muuqda mid aan doonayn in uu mustaqbalkiisa waqtiga dheer u hibeeyo PSG waxayna taasi war fiican u tahay kooxaha Yurub ugu waa wayn gaar ahaan Real Madrid oo waqti badan ku bixinaysay in ay dayarkan reer France hesho.